China 60MM / 2.4 လက်မ Magnetic Grinder Hexagon4Piece Zinc Alloy Spice ကြိတ်စက်နှင့်စက်ရုံ | ကျောက်တုံး
60MM / 2.4 လက်မ Magnetic Grinder Hexagon4Piece Zinc Alloy Spice Grinder
အသစ်ဒီဇိုင်းသတ္တုကြိတ်စက် - သံလိုက်အားဖြင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်သေးငယ်သောလေးလံသောလေးထောင့်လေးထောင့်လေးရှိအခန်းများသည်သင်အားပျိုးပင်ထဲထည့်သွင်း။ အပင်ကိုဖယ်ထုတ်ရန်လွယ်ကူစေသည်။
အရောင်: မီးခိုးရောင် / ငွေရောင် / နှင်းဆီရွှေ
အရွယ်အစား (D * H): ၂.၃၆ x ၂.၄၈ လက်မ (၆၀ x ၆၃ မီလီမီတာ)
အရွယ်အစား (အချင်း x အမြင့်): ၂.၃၆ x ၂.၄၈ လက်မ (၆၀ x ၆၃ မီလီမီတာ)
• အသစ်ဒီဇိုင်းသတ္တုကြိတ်စက် - သံလိုက်အားဖြင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်သေးငယ်သောလေးလံသောလေးထောင့်လေးထောင့်လေးရှိအခန်းများသည်သင်အားပျိုးပင်ထဲထည့်သွင်း။ အပင်ကိုဖယ်ထုတ်ရန်လွယ်ကူစေသည်။
• ဤသည်ပလက်တီနမ်ကြိတ်ခွဲစက်ကိုအစိုင်အခဲနှင့်ကြာရှည်ခံနိုင်သောဇင့်သတ္တုစပ်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ အရွက်ကြိတ်စက်အံသွားများသည်သင့်အားချောမွေ့လွယ်ကူစေရန်နှင့်ထိရောက်သောကြိတ်ခြင်းကိုသေချာစေသည်။ သွား၏အတိမ်အနက်သည် ၀.၃၉ '' ထို့ကြောင့်သင်သည်တစ်ချိန်တည်းတွင်ပျိုးပင်များကိုပိုမိုကြိတ်နိုင်ပြီးအစွန်းကိုမကျော်နိုင်ပါ။
• သင်၏ခြောက်သွေ့သောအရွက်များအားလုံးစပ်ရန်အတွက်ကြိတ်နယ်သောကြိတ်ခွဲစက်။ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခြင်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်များစွာတို့ကလေကိုကြိတ်ခွဲစေသည်။
• ကြိတ်ခွဲစက်များသည်ခြောက်ခန်းပါသောခြောက်သွေ့သောကြိတ်ခွဲစက်လေးဖြစ်ပြီး ၄ င်းကိုလျင်မြန်စွာ ၄ ပိုင်းခွဲရန်လွယ်ကူပြီးချည်မျှင်များမရှိသောကြောင့်သန့်ရှင်းစွာထားရန်လွယ်ကူသည်။
• LARGE CATCHER - အလွန်ကောင်းသောပျိုးပင်များကိုကြီးမားသော catcher ထဲသို့ဖမ်းယူ။ စစ်ထုတ်သည့်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းနှင့်အတူပါရှိသည်။
• တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကြီးမားသောပမာဏကိုအသုံးပြုပါ။ ခြောက်သွေ့သောအပင်ငယ်များကိုထိန်းသိမ်းထားသောကြောင့်အချို့သောအကြိမ်အနည်းငယ်ကိုကြိတ်ခွဲသောအခြားကြိတ်ခွဲစက်များနှင့်မတူပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကြိတ်စက်သည်အကျယ် ၂.၃၆ လက်မအကျယ်ရှိပြီးနက်ရှိုင်းသောအခန်းများနှင့်အတူမြက်ပင်များရှိနိုင်သည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင် ပို၍ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုကြိတ်ဆုံကြိတ်ပါ။
• FUNCTIONAL! ကျွန်ုပ်တို့၏ပရီမီယံကြိတ်စက်သည်သယ်ယူရလွယ်ကူပြီးအိမ်သုံးပစ္စည်းများအတွက်အကောင်းဆုံးအရွယ်အစားဖြစ်သည်။ အလေးချိန်သည်လေးလံပြီးလေးလံသော်လည်း၊ ၎င်းသည်သယ်ဆောင်ရန် ၀ န်ထုပ်ဝန်ပိုးကြောင့်မလုံလောက်ပါ။ ၎င်း၏နောက်ဆုံးလက်ဆောင်! သင်ကိုယ်တိုင်မဝယ်ပါကအနည်းဆုံးသင်၏သူငယ်ချင်းများကိုလက်ဆောင်အဖြစ်ဝယ်ပါ။
63MM / 2.5″ သွပ်အလွိုင်း Clear Top Herb ကြိတ်ခွဲ ...